3 Email Kushambadzira Zvishandiso Unofanirwa Kuziva Nezve | Martech Zone
Muvhuro, June 11, 2012 China, July 10, 2014 Lavon Tembere
Rugwaro rwekunyorera - Kana iwe uri kushanda neemail yekushambadzira agency, ivo vanogona kunge vatove nehukama nemumwe wako uyo anopa iwo mavara ekunyorera chimiro. Rugwaro rwekunyorera chinhu chikuru cheshambadziro reemail. Iwo maoko kubva padanho rekukura rako rekutumira email. Vako email vatengesi vanotora nguva yekumisikidza izvi iwe ugere pasi uye uchiona ichimhanya. Nesimba shoma, iwe uchaona kuti vanhu vanyore nyore nyore sei kusaina kuti vagamuchire maemail ako.
Email Kuteerera Kuongorora - Litmus uye Email pane Acid. Emaimeri makambani ekushambadzira akanaka anokuudza kuti iwe unofanirwa kuyedza maemail usati watumira. Aya maviri maemail ekushambadzira maturusi anokubatsira iwe kuti uite izvi zviri nyore uye pasina simba. Unogona kubaya maemail ako uye zvinokuratidza mashandisiro ainoita mumabhurawuza akasiyana uye pane akasiyana nhare mbozha. Izvo zvakanaka pakubatsira kuve nechokwadi chekuti munhu wese anogamuchira yako email makwikwi ari kuwana iyo YAKANAKA vhezheni inogoneka.
Chinyorwa Mutsetse Vanoedza. Kunyora mitsara yenyaya kuri nyore. Kugadzira mitsara mikuru yenyaya yakaoma. Kushanda nemaemail ekushambadzira aya. Litmus (zvakare!) Unogona kuve nechokwadi kuti uri munzira kwayo. Nekuisa yako yemusoro wenyaya mune chero eaya maturusi, iwe unogona kuwana mhinduro pane izvo zviri kushanda uye chii chisiri. Paunenge iwe uine zano reizvo zvisiri kushanda, inzwa wakasununguka kuzvishandura, zvivharise zvakare mukati, uye edza zvakare. Iwe unogona zvakare kukwanisa kushandisa Twitter kuyedza nyaya mitsara. Nyora mune akati wandei mavhezheni auri kufunga nezvekushandisa, batanidza kune zvimwe zvemukati, uye uone kuti nderudzii rwekupindura iwe rwaunowana kubva kune imwe zvichipesana neimwe.
Uye, hongu, kana iwe ukashanda neemail yekushambadzira agency, ivo vanogona kubatsira kuve nechokwadi kuti unoziva nezve aya akasiyana maturusi ekuita yako email nzira uye email makwikwi akanakisa avanogona kuve. Izvo zvakakosha kuve neemail yekushambadzira zano uye usinga nyunyuta maemail kune vanyoreri. Kana iwe usati uine zano parizvino, ungangoda kushanda pamwe neemail Marketing consultants kuti uvake hwaro hwakasimba.
Tags: kuwiriranaEmail Marketingemail pane acidlitmusvatambi vemutsarachinyorwa chekunyorera
Lavon Tembere ndiyo Dhijitari Media Nyanzvi pa BLASTmedia, kugadzira zvirongwa zvekutaurirana zvebhizimusi-kune-bhizinesi vatengi vachitsanangura zvinangwa, mazano, uye maitiro.
Kufungidzira zvichipesana nekudzorera zvekare